မြတ်ဗုဒ္ဓပေါ်အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြတ်ဗုဒ္ဓပေါ်အမြင်
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Sep 30, 2011 in Creative Writing |9comments
တစ်နေရာ ဖြစ်ရမှာ လူကျော်၁၀၀ မြတ်ဗုဒ္ဓ
ဂေါတမဗုဒ္ဓ အမည်တော်ရင်းက သိဒ္ဓတ္တမင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘာသာအယူဝါဒတွေထဲမှာပါတဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာကိုစတင်ပျိုးထောင်သူကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်။နီပေါ နဲ့ နယ်စပ်ယှက်တင်နေတဲ့ အရှေ့ မြောက်အိန္ဒိယမြို့ တော် ကပ္ပိလဝတ္တုဘုရင့်သားတော်သိဒ္ဓတ္တဟာ ဂေါတမအမျိုး သာကိယ(သကျSakya)အနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီး အခုနီပေါနယ်စပ်အဝင် လုမ္ဗိနီမှာ ခရစ်တော်မပေါ်မီ ၅၆၃ ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အသက်တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ်ရောက်တော့ ရွယ်တူနှမတော်နဲ့ လက်ဆက်ပြီးကြီးစွာသောမင်းစည်းစိမ်ကိုခံစားပြီးနေရသော်လည်း စိတ်မပျော်မွေ့ ပါ။
လူသားအများစုဟာ ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့ နေရပြီး အမြဲသဖြင့်လိုရာမရဖြစ်နေရပါတယ်။လူတစ်ချို့ ဟာချမ်းသာတယ်လို့ ဆိုရတာတောင် မကြာခဏစိတ်ပျက်စရာ၊မနှစ်သက်စရာကိစ္စတွေကြုံရသေးတယ်။ရောဂါဝေဒနာ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကြုံရပြီး၊သေခြင်းဆင်းရဲ ကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ပါ။ခုလိုအခိုက်အတန့် နှစ်သက်ဖွယ်တွေကို အိုနာသေဘေးတွေက မကြာမီလွှမ်းမိုးသွားတာဘဲလို့ တွေးတယ်။
သက်တော်နှစ်ဆယ့်ကိုး၊သားဦးရတဲ့အခါ ဂေါတမက ခုလက်ရှိအနေအထိုင်ကိုစွန့် ချိန်တန်ပြီလို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။အမှန်တရားကိုစူးစူးစိုက်စိုက်ရှာဖွေသင့်ပြီ ဆိုတဲ့အကြံနဲ့ နန်းတော်ကိုစွန့် တယ်။ဇနီးကိုထားခဲ့တယ်။သားကို ပစ်ခဲ့တယ်။လူ့ ဘဝပိုင်ဆိုင်သမျှစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ ကိုထားခဲ့ပြီး ပစ္စည်းမဲ့ခရီး လှည့်လည်သွားလာနေသူဖြစ်ခဲ့တယ်။ခေတ်အခါအလျှောက် ပညာရှိ၊လူသူတော်အချို့ နဲ့ တွဲဖက်ပြီး ကျင့်စဉ်အချို့ ကိုလိုက်ကျင့်တယ်။သူတို့ နည်းကိုသိတော့ အတိမ်အနက်ကိုကြံဆတယ်။လူ့ ဘဝဒုက္ခတွေကို ဖြေဖျောက်ငြိမ်းအေးစေတဲ့ နည်းတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ သိတယ်။အလွန်အကဲ ခြိုးခြံနိုင်မှ တရားမှန်ကို ရနိုင်မယ်လို့ အများတကာထင်နေကြတာကို အရှင်ဂေါတမက လိုက်ပြီးသူတော်စင်တွေလိုဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခြိုးခြံတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကို ညှည်းတဲ့ အလုပ်တွေအများကြီးပါတယ်။နောက်တော့ ဒီလိုသာ ခန္ဓာကိုယ် ကို နှိပ်စက်နေရင် ဦးနှောက်အမြင် မကြည်လင်ဘဲသစ္စာတရားနဲ့ ဝေးသထက်ဝေးလာမယ်လို့ သိလာတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်းထန်လှတဲ့ ကျင့်ဝတ်ကိုစွန့် ပြီး စားသောက်ဖွယ်တွေကို စားမြဲမျှတအောင်မှီဝဲ သုံးဆောင်ပါတယ်။
ဆိတ်ငြိမ်ရာမှာ တစ်ပါးတည်းအားထုတ်တာကတော့ ဘဝရဲ့ ချုပ်ငြိမ်းရာ တရားပါဘဲ။နောက်ဆုံးတစ်ညနေ ညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာ ထိုင်နေရင်း တစ်စစီ တစ်ပိုင်းစီးဖြစ်နေတဲ့ သဘာဝတရားတွေဟာ အလိုလိုအချိုးကျအောင် စီစဉ်ပြီးဖြစ်လာတယ်။သိဒ္ဓတ္တဟာ တစ်ညလုံးပေါ်ပေါက်သိရှိလာတဲ့ တရားတော်ကို လေးလေးစားစားပြန်လှန်ဆင်ခြင်ပြီး၊ရှာနေတဲ့ အဖြေရပြီး နံနက်အရုဏ်လာတဲ့အခါ “ဥာဏ်ပွင့်လင်းပြီး”ဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီ။
အဲဒီအချိန်မှာ သက်တော် သုံးဆယ်ငါးနှစ်ရှိပြီ။ကျန်ရှိနေတဲ့ လေးဆယ်ငါးနှစ်မှာ (မဇ္စိုမဒေသ)မှာ ဒေသစာရီကြွချီပြီး ဝါဒသစ်ကို နာလိုသူတိုင်း ဟောပြော ဆုံးမတော်မူပါတယ်။ပရိနိဗ္ဗာန် ယူတဲ့ ၄၈၃ ဘီစီမှာ တရားတော်ကို လက်ခံသူထောင်နဲ့ ချီပြီး ရှိလာပြီ။အစက တရားတော်ကို အက္ခရာတင်ထားခြင်းမရှိပါ။တပည့်အရိယ သံဃာတွေက နှုတ်တက်အာဂုံဆောင်ထားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဆရာစဉ်ဆက်ပေါ်လာပြီး တရားတော်ကိုထိန်းသိမ်းလာကြတယ်။
တရားအချုပ်ကို ပြောရရင် ”သစ္စာလေးပါး”ဖြစ်တယ်။
နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်စေနိုင်သော တရားလမ်းကောင်းဖြစ်သော မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး
(၁)သမ္မာဒိဠိ(၂)သမ္မာသင်္ကပ္ပ (၃)သမ္မာဝါစာ(၄)သမ္မာကမ္မ န္တ(၅)သမ္မာအာဇီဝ
ဗုဒ္ဓဝါဒ ရဲ့ ထင်ရှားမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်တဲ့ အချက်နှစ်ချက်က လူမျိုးကန့် သက်ချက်နဲ့ ဟိန္ဒူတွေလို ဇာတ်အကြီး၊အလတ်၊အညံ့ဆိုတာမျိုး မရှိပါ။
မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက်၊ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတဲ့ အယူသစ်ကတဖြည်းဖြည်းပျံ့ နှံ့ လာတယ်။နောက်ခရစ်တော်မပေါ်မီ သုံးရာစုနှစ်မှာ အိန္ဒိယဧကရာဇ် အသောကမင်းတရားကြီး ဗုဒ္ဓသာသနာကိုသက်ဝင် ယုံကြည်လာတယ်။မင်းကြီးရဲ့ တိုက်တွန်းအားပေးချက်နဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတွေပေါ်လာပြီး၊ဗုဒ္ဓသြဇာနဲ့ တရားတော်ဟာ အိန္ဒိယမှာ ရောအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာပါ ပျံ့နှံ့ လာပါတယ်။ဗုဒ္ဓဝါဒဟာ တောင်ဘက်ကို သီရိလကာင်္၊အရှေ့ ဘက်ကို မြန်မာ၊အဲဒီကနေမှ အရှေ့ တောင်အာရှ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှား တို့ ကိုရောက်သွားပါတယ်။ဗုဒ္ဓဝါဒဟာ မြောက်ဘက်မှာ ဆိုရင် တိဘက်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ပြီး အဲဒီကနေမှ အနောက်မြောက် အာဖကန်နစ္စတန်နဲ့ ဗဟိုအာရှကိုရောက်သွားပါတယ်။တရုတ်ကိုရောက်ပြီး ကိုရီးယား ဂျပန်ကိုရောက်ပါတယ်။
အနှစ်ငါးရာကျော်တော့ အိန္ဒိယမြေပေါ်မှာဗုဒ္ဓအယူသစ်ကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူနည်းလာတယ်။အနှစ်တစ်ထောင့်နှစ်ရာ ရှိတဲ့အခါယုံကြည်သူမရှိလို့ ပြောရမတတ်တိမ်ကောသွားတယ်။ဒါပေမယ့် တရုတ်၊ဂျပန်မှာတော့ ရှေ့ ဆောင်ယုံကြည်မှုဝါဒကြီး တစ်ရပ်အနေနဲ့ ရှိနေပါတယ်။တိဘက်နဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှမှာ ဆိုရင် ထိပ်တန်းကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုဘာသာတရားအဖြစ်နဲ့ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးရာစုနှစ်ပေါင်းအများကြီးကြာအောင် အက္ခရာတင်ပြီးရေးမှတ်ထားတာမတွေ့ ရ။ဂိုဏ်းတွေ အများကြီးကွဲသွားတာက မဆန်းလှပါ။အကြီးအချုပ်လို့ ပြောရမယ့်ဂိုဏ်းကြီးနှစ်ခုက အရှေ့ တောင်အာရှမှာ အားကောင်းပြီး အနောက်တိုင်းသုတေသီတွေက ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူရင်းနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ယူဆတဲ့ ထေရဝါဒနဲ့ တိဘက်၊တရုတ်နဲ့ အကြမ်းအားဖြင့်မြောက်ပိုင်းအာရှ မှာ ထင်ရှားတဲ့ မဟာယာနတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအယူဝါဒ အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာကို စတင်ခဲ့လို့ ဒီစာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးတစ် နေရာက ပါရမှာ အမှနိဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေကိုတွက်စစ်လိုက်တော့ ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်က ကုဋေနှစ်ဆယ်၊မူဆလင် က ကုဋေ ငါးဆယ်၊ခရစ်ယန်က ကုဋေ တစ်ရာ။စာရင်းအရ မိုဟာမက်နဲ့ ဂျီးစပ်စ်လောက် အင်အားမရှိပါဘူး။ဒါပေမယ့် လူများတိုင်းသာ တယ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ခက်ပါတယ်။””အိန္ဒိယမှာ ဟိန္ဒူက ဗုဒ္ဓဝါဒတွေအများကြီး သူတို့ ဝါဒတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းလိုက်တာရယ်၊တရုတ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ နာမည်မခံသူတွေကလည်း ဗုဒ္ဓဒဿနတွေ အများကြီးကို လိုက်နာနေကြတယ် ဆိုတဲ့အချက်တွေကို စဉ်းစားပါ။””
ခရစ်ယန် နဲ့ အစ္စလာမ် မှာထက်ဗုဒ္ဓတရားတော် မှာငြိမ်းချမ်းရေးအခြင်းအရာတွေပိုတွေ့ ရှိရပါတယ်။အကြမ်းမဖက်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကိုသာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ဝင်နိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံအရေးမှာ အရေးထားလုပ်ဆောင် နေတာကို တွေ့ မှာဖြစ်ပါတယ်။လူပုံအလယ်မှာ မကြာခဏပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ရပ်မှာ…….
“ခရစ်တော် သာလူ့ ပြည်တစ်ခေါက် ပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင် သူ့ ဝါဒ ကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေပါတယ်ဆိုပြီး ဂိုဏ်းကွဲတွေပေါ်နေတယ်။သူ့ နာမည်ကိုသုံးပြီး တစ်ဦးကိုတစ်ဦး သွေးချောင်းစီးအောင် သတ်ဖြတ်နေကြတယ်။အဲဒါတွေကို တွေ့ ရင်အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့် အံ့သြသွားမယ်ထင်တယ်။””
“”ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လဲ ဗုဒ္ဓဝါဒီလို့ ပြောပြီး ပြုမူဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးစုံကိုတွေ့ ရရင် အံ့သြသွားမယ် အမှန်ပါဘဲ။””
ဗုဒ္ဓဂိုဏ်းကွဲတွေကများတယ်။ကြီးကျယ်တဲ့ခြားနားချက်တွေရှိတယ်။ဒါပေမယ့်ခရစ်ယန်သာသနာဝင် တွေဘဲရှိတဲ့ ဥရောပ မှာလို ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့သာသနာရေးစစ်(Religious War)ဆိုတာမျိုးကိုမီဖို့ ဝေးလို့ အနည်းအပါးနီးစပ်တဲ့ သတ်ဖြတ်မှုမျိုးတောင်နှိုင်းယှဉ်ပြစရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာ မတွေ့ ပါ။အဲဒီမှာ ခရစ်ဝါဒထက် ဗုဒ္ဓဝါဒက သက်ဆိုင်ရာဘာသာဝင်များအပေါ်မှာ သြဇာသက်ရောက်တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
ဗုဒ္ဓနဲ့ ကွန်ဖြူးရှပ် ရဲ့ အယူဝါဒတွေဟာ ကမ္ဘာ့လူသားတွေအပေါ်မှာ အကြမ်းသဘောပြောရရင် သြဇာရှိပုံခြင်းတူသလိုရှိတယ်။ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ခေတ်ချင်းလည်းတူတယ်။လိုက်နာယုံကြည်သူ အရေအတွက်လည်းဆတူနီးပါးဖြစ်တယ်။အဆင့်(၄)နဲ့ အဆင့်(၅)ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓကို ရှေ့ ကွန်ဖြူးရှပ်ကိုနောက်ထားပြီးစီရတာမှာ အကြောင်းအရာနှစ်ချက်ရှိတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒထွန်းကားလို့ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒအများကြီးတိမ်မြုပ်ရတာက တစ်အချက်၊တရုတ်နိုင်ငံအပြင်ကို ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် မရောက်တာက နှစ်အချက်ဖြစ်တယ်။လက်ရှိတရုတ်သဘောထားတွေမှာကွန်ဖြူးရှပ်ရဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာမြုပ်သွားပီ။ဗုဒ္ဓရဲ့ ဆိုဆုံးမချက်တွေကတော့ယခင်ရှိပြီး အိန္ဒိယ နယ်ကိုကျော်ပြီး ပြန့် ထွက်လာခြင်းက ဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့ ပင်ကိုအသိနဲ့ လူအများလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်အောင်လေးနက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းစာရေးသူက လူကျော် တစ်ရာကိုတန်းစီးဖို့ ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ပေတံသုံးခု ဆုံးဖြတ်တာပါတဲ့…..အဲဒါတွေက
(၂)ဒီလူရဲ့ အစွမ်းနဲ့ လူတွေဘယ်လောက်များများ အကျိုးခံစားရပါသလဲ။
(၃)ဒီလူ့ ကျေးဇူးကို လူတွေ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ခံစားရသလဲ။
အဲဒီ မေးခွန်းပေတံ သုံးခုနဲ့ ဘဲ လူတွေကို ပထမ၊ဒုတိယဆိုပြီးတန်းစီလိုက်တယ်။အဲဒီလို ရွေးချယ်တာကို ဆရာသန်းထွန်းက ကြိုက်ပါတယ်တဲ့။ဒီနေရာမှာ စာဖတ်ပရိသတ်က ကိုယ့်ဥာဏ်စွမ်းလေး နဲ့ ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့် နံပါတ်တစ် မဖြစ်ပါဘဲ အဆင့်လေးရောက်သွားရတာလဲဆိုတာကိုပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဝိဝါဒ မကွဲပြားစေလိုပါ။အမှားပါခဲ့ပါက ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
ဗုဒ္ဓဟောတဲ့တရားတွေဟာ.. ပါဠိလိုတွေဖြစ်လို့ ..(ကျနော်..ပါဠိစာ နားမလည်ပါ)
International Language မဟုတ်လို့ လူအများနားမလည်ကြလို့ ….
Promotion မကောင်းလို့ ..
လက်တွေ့ ကျင့်ကြံနိုင်မှ သဘောပေါက်မဲ့ တရားဖြစ်လို့ ..
စည်းစိမ်လာဘ်လာဘ ရရန် အဓိကမဟုတ်ပဲ..ဆင်းရဲခြင်းကင်းတဲ့ ဗလာနတ္တိ နိဗ္ဗာန် ကိုရည်ရွယ်လို့ 
ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ တရားဖြစ်ပြီး ဘုရားက သင်တို့အပစ်ကို အစားမခံပေးနိုင်လို့ 
တစ်ကယ် ကျင့်ကြံပါက ရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေ အရင် စွန်လွှတ်ပြီး…ခြင်ကိုက်ခံ ရမှာဆိုးလို့ ..
ဘုရားအကြောင်းသာ ပြောနေရတာ သြကာသတောင် အလွတ်ရတော့သည်မဟုတ်ပါဘူး
မနေ့ တစ်နေ့ ကမှ ဘုရားတက်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေပေါ်လာလို့ …၀င်ဝင်ပြောမိတာဖြစ်ပါတယ်
ဘုရားတရားကြောင်းပြောရင် မောင်ပု လာလာမဆဲ ဘူးဆိုတာလဲ သိထားလို့ ဘုရားတရား ဘက်ပြေးလာတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်
အရက်သမားခြင်းတူတူ..အဲဘဲက ဒီတစ်ပတ် ပေါ်ပျူလာ ရိုက်တာစာရင်းထဲ ပါသွားတာတော့ မနာလိုဘူး
ပေါက်ဖော် ကနဂိုနာမည်ပြန်ဖြစ်သွားပီလား အကိုရေ။ခုလိုဝေဖန်ပေးတော့ ကျေးဇူးပါခင်မျာ။ရွာသားတွေ သိပ်ဝင်မပြောကြပါလား။
အမှားမပါလို့ ဒီလောက်အေးဆေးဆိပ်ငြိမ်တာပေါ့ မိတ်ဆွေရယ်။
” ရွာသားတွေ သိပ်ဝင်မပြောကြပါလား။ ကျွန်တော် အမှားပါသွားပီလား ”
You made nothing wrong, မောင်သန်းထွဋ် ဦး.
There arealot of religious “Sa Yar Gyi” in our MG village,
( recently, they fiercely fought each other in “Moe Pyar” posts )
So, we feel inferior & scare to start makingacomment ( in front of them ). :p
If it is your creative own writing,
then, what else we have to say,
ကိုရင်မောင်သန်းထွဋ် ဦး ..(ရှည်လိုက်တာ)..
ကိုရင်ဦးက.. ဘယ်ကစာတွေကိုးကားသလည်း.. ပြန်ကူးသလည်း.. စာမျက်နှာနဲ့တင်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်..။
ကြည့်ရတာ..ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့..ဘာသာပြန်စာလို့ထင်ပါတယ်.။ စာအုပ်အမည်နဲ့.. ကိုးကားရေးတဲ့.. စာမျက်နှာပါ ရေးပေးထားပါလား.. နောင်တချိန်..အငြင်းမပွားကြရအောင်ပါ…။
ဒီကမ္ဘာမှာ.. ပထမဆုံး.. ဗုဒ္ဓနဲ့စစ်တပ်နဲ့..ဆက်စပ်ဖြစ်သွားတာ.. ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့သာသနာရေးစစ်(Religious War)ဆိုတာမျိုးဖြစ်ခဲ့..ဖြစ်နေတာကို.. အဲဒီမူရင်းစာရင်းပြုစုသူစာရေးဆရာ မသိမမှီလိုက်ဖူးထင်ပါတယ်..။
သိရင်.. အရေးအသား..အတွေးအခေါ်နည်းနည်းတော့ ပြောင်းသွားမလားပဲနော..။
The Democratic Karen Buddhist Army (Burmese: တိုးတကျသော ဗုဒ်ဓဘာသာ ကရငျအမြိုးသား တပျဖှဲ့; abbreviated DKBA) isabreakaway group of Buddhist former soldiers and officers of the Karen National Liberation Army (KNLA), one of the larger insurgent armies in Burma. Since shortly after their breakaway in 1994, the DKBA have enjoyedaceasefire with the Myanmar army.
The Karen insurgency began with Burma’s independence from the British in 1948 and is the longest running in Myanmar today. Though the majority of Karens are Buddhist, the Karen political leadership and leadership of the Karen insurgency have always been overwhelming Christian,alegacy of American missionary influence over the 19th and early 20th centuries. The DKBA breakaway was rooted in the perceived discrimination by the Christian leadership against local Buddhist Karen communities and the Buddhist Karen rank-and-file of the Karen insurgency KNLA.
The Burmese army was quick to exploit the breakaway and soon agreed toaceasefire arrangement with the DKBA, who have since profited from various sanctioned business arrangements, at the expense of the KNLA who long dominated trade and revenue extraction in the area.
ဟုတ်ကဲ့ပါ သူကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခုလိုဝင်ရောက်ထောက်ပြပေးတော့ ကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဗျာ။
ဗုဒ္ဒ သာသနာနဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ခေတ်အမြင်နဲရှင်းလင်းသွားလို့ ၀မ်းသာပါတယ်
ဘယ်သူ ရေးရေးပါ … ဒီလို တင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်။
“““တရားအချုပ်ကို ပြောရရင် ”သစ္စာလေးပါး”ဖြစ်တယ်။
အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေကို ထောက်ပြသွားတာပါ…
ကိုရင်ဦး ရေဗျာ.. ဝင်မရေးတာမဟုတ်ပါ… မျက်စိ အပြူးသားနဲ့ သေချာနားလည်အောင်
ဖတ်နေရလို့ပါ… အားကျတယ် လို့ပဲ ပြောပါရစေ..